လင်္ကာ: စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဇတ်သိမ်းစေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်အမျိုးသမီး
၁၉၈၀ အထိ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံဟာ တပါတီအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။၁၉၈၀ မှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးအပြင်းအထံနှိပ်ကွပ်မှု့တွေ၊သတ်ဖြတ်မှု့တွေအမြောက်အများကိုကျူးလွန်တော့တာပါပဲ ၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှု့ကို ဦးဆောင်သူက ဆင်မြူရယ် ဒိုးဆိုသူဖြစ်တယ်….သူဟာ.. အရင် အစိုးရလက်ထက် သမ္မတ…၀ီလျှံတျွှိုင်းဘတ်ဆိုသူအပါဝင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကို လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မွန်ရိုးဗီးယားဆိုတဲ့မြို့ရဲ့ကမ်းခြေတခုမှာ..သစ်လုံးတိုင်မှာကပ်တန်းစီပြီးသေနပ်နဲ့ပစ်သတ်လိုက်တယ်….နောက်များမှာလည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု့တွေ….လာဒ်ပေးလာဒ်ယူမှု့တွေ၊အာဏာအလွှဲသုံးစားလုပ်မှု့တွေတပြုံကြီးကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရင်း……တိုင်းပြည်ဟာလုံးပါးပါးလာခဲ့တော့တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ဆင်မြူရယ်ဒိုး ဟာ အရင်အစိုးရလက်ထက် သမ္မတဟောင်း နဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တုန်းကများဆိုရင်…အဲဒီညမှာအောင်သေအောင်သား…စားပွဲသဘင်တောင်ကျင်းပရင်း…တရားသောစစ်ပွဲကိုဆင်နွဲခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးတဦးပမာ….ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားမှု့အပြည့်နဲ့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့….ဆင်မြူရယ်ဒိုးအစိုးရအဖွဲ့ထဲက…ချားတေလာဆိုသူကို..သူက..ဒေါ်လာတသန်းလာဒ်စားမှု့နဲ့ ထောင်ချပစ်လိုက်တယ်…ချားတေလာက..ထောင်ကလွတ်လာတော့…လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံမှာမနေတော့ပဲ…နိုင်ဂျီးယားနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်…လူသူလက်နှက်စုဆောင်းပြီး…ဆင်မြူရယ်ဒိုးကိုတော်လှန်တော့တာပဲ…အဲဒီမှာတင်..လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာအကြီးအကျယ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်…ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကလည်း ဆင်မြူရယ်ဒိုး အစိုးရကို မကျေနပ်တော့ဘူး….တော်လှန်သူ ချားတေလာကိုလည်း သွားလေသူ…..လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ကဒါဖီကသွေးထိုးမြှောက်ပေးတယ်….ချားတေလာရဲ့လက်နှက်ကိုင်တပ်တွေဟာ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်လာရင်း…ချားတေလာနဲ့လက်တွဲဖော်…မင်းသား ဂျွှန်ဆင်..ဆိုသူကတခါ…ချားတေလာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြန်ရော……ဒါပေမဲ့…သူတို့နှစ်ဦးကသဘောထားမတဲ့ကြပေမဲ့…ဆင်မြူရယ်ဒိုးကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာတော့တပြိုင်နက်ထဲတော်လှန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်…..လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံကြီးတခုလုံးဟာစစ်တလင်းပြင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ…တနေ့မှာတော့….မင်းသားဂျွှန်ဆင်ရဲ့သူပုန်တပ်တွေက…မြို့တော် မွန်ရိုးဗီးယားကို ၀င်တိုက်ခိုက်ရာက…စစ်အာဏာရှင် သမ္မတ..ဆင်မြူရယ်ဒိုး ကိုအရှင် လက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်…..ဒီတခါ အောင်သေအောင်သား အစားခံရသူက ဆင်မြူရယ်ဒိုး…..
အခန်းကျယ်ကျယ်တခုမှာ…မင်းသား ဂျွှန်ဆင်က..စားပွဲခုံနောက်က ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ရင်း ဘီယာသောက်အမြည်းစားမပျက်..စကားတွေခြွေလို့…ယက်ခပ်ပေးသူနဲ့…မျက်နှာသုတ်ပေးသူနဲ့…..သမ္မတ ဟောင်း ဆင်မြူရယ် ဒိုး ခမျာ..အ၀တ်စားမဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ရင်း…ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ရာဇ အိနြေ္ဒမရှိ…အရူးကြီးတယောက်လိုပဲ….မင်းသားဂျွှန်ဆင်ကိုလည်း….မင်းသား..မင်းသားနဲ့ခေါ်ရင်းဆင်ခြေပေးနေရတာလည်း အမောသား…ဒီလိုနဲ့အပြန်အလှန်ပြောနေရင်းက…မင်းသားဂျွှန်ဆင် ရဲ့တပ်သားတွေက… သမ္မတဟောင်း ဆင်မြူရယ်ဒိုး ကိုဆွဲလှဲပြီး…နားရွက်တဘက်ကို အစိမ်းလိုက်ဖြတ်… သူ့ဗိုက်ပေါ် တင်ထားလိုက်တယ်….ခန္ဓာကို တခုလုံးကိုလည်း ဓါးနဲ့ခပ်ပါးပါးလိုက်မွှမ်း……ရဲဘော်တွေက ခြေထောက်တွေနဲ့ သူ့ခေါင်းပေါ်…သူ့ပုခုံးပေါ်ကို တက်နင်းထားရင်း ဂုဏ်ယူလို့…အပြုံးတွေကိုယ်စီနဲ့……( တခါက ဆင်မြူရယ်ဒိုးလည်း…သူ့အရင် သမ္မတဟောင်းကို ဒီလိုသတ် ဒီလိုပျော်ခဲ့ဘူးပါတယ်….) နောက်တော့ သတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဆင်မြူရယ်ဒိုး ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရပြီး လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံကို ချားတေလာက ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်…..ချားတေလာက တခါ မင်းသားဂျွှန်ဆင်နဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကို နှိပ်ကွပ်လို့ ပြည်တွင်းစစ်က မဆဲ….မင်းသားဂျွှန်ဆင်လည်း မနိုင်တော့တဲ့ အဆုံး သူလည်း နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လေ….အဲဒီရောက်တော့…သူတော်တော်တရားကျသွားပုံရတယ်….ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုလေးလေးနက်နက်ခံယူယုံကြည်ပြီး…ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေနဲ့ကျင့်ကြံနေထိုင်ခဲ့တယ်….သူရက်စက်ခဲ့တဲ့…ဆင်မြူရယ်ဒိုး မိသားစုနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ ဆုံလိုက်ရတဲ့အခါမှတော့… သူတော်တော် ကျေကွဲ သွားတယ်လို့ စာထဲမှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
အာဏာရှင်ကို လက်နှက်ကိုင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရင်း အာဏာရယူခဲ့တဲ့ ချားတေလာ လည်း သူ့ထက်သူလူစွမ်းကောင်းဖြစ်လာတယ်လေ……ပထမပိုင်းမတော့…လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ တွေဘာတွေကျင်းပပေးသေးတယ်ဗျ…..အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအခုသမ္မတဖြစ်နေတဲ့နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်အဲလင်….လည်းဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သေးတယ်…..ဒါပေမဲ့သူမနိုင်ဘူး…လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုတော့နိုင်ငံတကာကလေ့လာသူများက…၀န်ခံခဲ့တယ်……တဖြည်းဖြည်းနဲ့….ချားတေလာရဲ့အာဏာရှင် စရိုက်တွေဟာတော်တော်ဆိုးလာတယ်….သူလည်းရှေ့က….ဆင်မြူရယ်ဒိုးလိုလူတွေအများကြီးသတ်…ထောင်ချ….ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာ…..( ဒီလိုလူကို လူထုက ဘာလို့ ထောက်ခံမဲတွေပေးပြီး နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဆိုတော့…သူ့ကိုသာအနိုင်မပေးရင်ပြည်တွင်းစစ်ဟာ…နောက်တကျော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြန်ဖြစ်လာမှာကို လူထုက သိနေတယ်လေ )။
ချားတေလာ လက်ထက်မှာ ကမ္ဘာမှာနံမည်ကြီးတာတခုရှိတယ်…အဲဒါဘာလည်းဆိုတော့ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံက ထွက်တဲ့စိန်ကို သွေးစွန်းနေသောစိန်များဆို သတ်မှတ်ပြီး သပိတ်မှောက်ခံရတာပါပဲ။ ချားတေလာ ရဲ့တပ်သားတွေဟာ..စိန်ထွက်ရာ အရပ်တွေမှာ…စိန်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ပစ္စည်းလည်းယူ လူလည်းအပျောက်ရှင်း ဆိုတာမျိုးတွေ…လူတွေကို မတရားခိုင်းစေပြီး စိန်အရှာခိုင်းတဲ့အတွက် သေကြေကြတဲ့လူဦးရေဆိုတာ သိန်းနဲ့ချီရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ချားတေလာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လက်နှက်ကိုင် သူပုန်တွေကတိုက်ခိုက်ကြပြန်တော့…. ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာ တဟုန်ငြီးငြီးတောက်လောင်ရပြန်ရှာတယ်…သူကလည်း….ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့မတဲ့ဘူး…အဲဒီနိုင်ငံတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေကိုသူကအထောက်အပံ့ပေးတယ်…သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ကဒါဖီလို နံမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့သူရဲ့အထောက်အပံ့တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ခံတယ်။ အဲဒီတော့ ပါတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေက သူ့ကိုအမြင်ကပ်လို့ ဆန့်ကျင်တဲ့ သူပုန်အင်အားစုတွေကို အထောက်အပံ့ပြုတယ်…သူပုန်အင်အားစုတွေက အင်အားကောင်းလာပြန်တယ်။ လိုက်ဘေးရီးယားရဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးမှာ ထပ်တခါ ပြည်သူတွေ အများအပြားသေကျေပျက်စီး ။ အငတ်ဘေးဆိုက်နဲ့…နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးတပ်များအပါဝင်…အကူညီတွေနဲ့ဝင်ရတဲ့အခြေနေကိုဆိုက်ရောက်လာတော့မှ…ချားတေလာလည်း နိုင်ဂျီးယား နိုင်ငံဆီကို ထွက်ပြေးသွားတော့တယ်…နိုင်ငံကို သူ့လက်အောက်က..ဒုသမ္မတနဲ့လွှဲပြောင်းထားပေးခဲ့တယ်။ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်း အာဏာရှင်တွေဖြစ်ကုန်နောက်ထပ်အာဏာရှင်လုပ်ချင်နေသူများကပြည်တွင်းစစ်ကိုဖန်တီးနဲ့လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံဟာ…ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေထဲက တနိင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်။ချားတေလားလည်း နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးမှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှု့တွေနဲ့ တရားစွဲခံရပြီး ရင်ဆိုင်နေရတာ ခုထိပါပဲ။ တရားကျစရာတခုက နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးမှာတရားစွဲဆိုဘို့ သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီး ပို့တော့ လေယာဉ်ပေါ်က အဆင်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံထဲမှာ လက်ထိပ်ကလည်း ခပ်ထားခံရတော့ သူ့မျက်နှာဟာ ဇီးရွက်လောက်လေးပဲရှိတယ်……။
သူ့ကို တချို့က အယ်လင်လို့လည်းခေါ်တယ် တချို့ကတော့ ဆာလိလို့ခေါ်ကြတယ်။ ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီး ၊ အမေရိကန် ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်က စီးပွားရေး ပညာရပ်နဲ့ မဟာဘွဲ့ရခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူက….သမ္မတ….၀ီလျှံတွိုင်းဘတ်….လက်ထက်မှာဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန် ထမ်းရွက်ခဲ့ဘူးသူ။၁၉၈၀….မှာစစ်အာဏာသိမ်းတော့….ဆင်မြူရယ်ဒိုးကသူ့ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပစ်လိုက်တယ်။ထောင်ကလွတ်လာတော့လည်း….အကြိမ်ကြိမ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဖိအားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ လိုက်ဘေးရီးယားနိင်ငံထဲမှာနေနေရစဉ် …..ဘယ်လိုမှ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုနေလို့မရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ဒါတွေအားလုံးကို စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်…… ဆင်မြူရယ်ဒိုးကအကွက်ကျကျဖန် တီးခဲ့တာတွေပါ။ သူ့အသက်အန္တယာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေနေထိ ဖြစ်လာခဲ့တယ်……ဆင်မြူရယ်ဒိုးရဲ့တပ်သား တွေက သူမကို မုဒိန်းကျင့်ဘို့ထိ ကြိုးစားခြင်းခံခဲ့ရတယ်……အားလုံးက သူမကိုဝိုင်းဖမ်းပြီး မုဒိန်းကျင့်လုဆဲဆဲ အချိန်မှာ သူမကပြောလိုက်တယ်……
“ ငါ မင်းတို့ လက်ထဲမှာရောက်နေပြီ…ငါ့မှာ ခုခံနိုင်တဲ့အင်အားလည်း မရှိဘူး…ငါက မိန်းမသားပဲ…..ဒါပေမဲ့ တခုတော့ ပြောပရစေ….ငါ့ကို မင်းတို့ မိခင် တယောက်လို့ စဉ်းစားကြည့် ပေးစမ်းပါ…..” ဒါနဲ့ သူလည်း မုဒိန်းကျင့်ခံရဆဲဆဲအချိန်လေးက လွတ်မြောက်သွားခဲ့ တယ်… .သူဆက်ပြီး……လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်..ဒါ့ကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာပြီး…ပြည်ပြေးဘ၀ကိုရောက်သွားတယ်….
ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးကာလတွေမှာ……သူမပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာ..စိတ်ဝင်စားစရာအလွန် ကောင်းလှပါတယ်……..လိုက်ဘေးရီးယားရဲ့၁၄..နှစ်တာပြည်တွင်းစစ်ကာလများမှာ…အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လှန်ရင်းအာဏာရှင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်…တိုင်းပြည်စစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်….တိုင်းပြည်ဟာအထွေထွေအကြပ်အတည်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲပဲဖြစ်တယ်…..လျှပ်စစ်မီးဆိုတာမရှိဘူး….ရေသွင်းရေနှုတ်မြောင်းစနစ်ဆိုတာမရှိဘူး…ဆေးရုံတွေစာသင်ကျောင်းတွေဆိုတာလည်းပျက်စီးနေပြီ…အဲဒီတော့….ကျမတို့…အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုမြေမြူတ်သဂြိုလ်ပစ်ရမယ်…..ဒီလိုလုပ်ဘို့ဆိုတာ…အကြမ်းဖက်တဲ့စနစ်နဲ့သွားလို့မရဘူး….အကြမ်းမဖက်တဲ့စနစ်နဲ့သွားမှရမယ်…ကျမသင်ခန်းစာရလိုက်တာက…အကြမ်းဖက်တော်လှန်တိုင်း…အာဏာရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့…သာဓကပဲ….ဒါကို….ကျမလက်မခံတော့ဘူး…အကြမ်းမဖက်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့….ဒီမိုကရေစီကို ထူထောင်မယ်…တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်မယ်…နိုင်ငံသားတွေဘ၀လုံခြုံအောင်စီမံမယ်…..ကျမကိုချစ်တဲ့သူတွေသာလျှင်မကဘူး…မုန်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတိုးတက်နိုင်ရေးကိုဦးတည်မယ်…..အားလုံး..အားလုံး…လိုက် ဘေးရီးယားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်ကျမကြိုးစားချင်တယ်…..အရေးကြီးဆုံးတချက်က…အာဃာတတွေဖယ်ဖျောက်ပါ…..ဒါအလုပ်မဖြစ်ဘူး…အပြန်အလှန်သတ်ဖြတ်မှု့တွေအလုပ်မဖြစ်ဘူး…..တိုင်းပြည်နစ်နာလှပါတယ်…..ဒီလိုပြောလိုက်လို့…..ကျမက….မစာမနာပြောတယ်လို့မယူဆပါနဲ့…ကျမကိုယ်တိုင်လည်း…ဘယ် လောက်ထိနစ်နာခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်…..”
“ သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာ…ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာပျော်ရွင်နေကြလောက်ပါပြီ……..ကျန်နေသေးတဲ့သူတွေ ဘာဆက်လုပ်ကြမလည်း….လက်တုန့်ပြန်ရင်းနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုပြန်သွားရင်းအငတ်ခံကြမလား…တိုင်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကို လုပ်ကြမလား…ရွေးချယ်ကြရအောင်…လက်တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမဲ့ ခံစားရမဲ့ အကျိုးဆက်က စိတ် အာသာပြေခြင်းတခုပါပဲ…ကျန်တာ ဘာမှ အကျိုးအမြတ်မရှိပါဘူး……” ကျန်ရှိနေကြတဲ့အားလုံးသောမိသားစုဝင်တွေဟာသူနဲ့အတူထပ်တူခံစားခဲ့ရတယ်……….သူမကပရိပ်သတ်ကိုမေးခွန်းမေးခဲ့တယ်
“ကျမ…….လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံတိုးတက်ဘို့အတွက်…..ပေးလာတဲ့အခွင့်ရေးတွေကိုမလွတ်တန်းအသုံးချခဲ့ တယ်….ဒီအတောအတွင်းတွေမှာ..အန္တယာယ်တွေလည်းရင်ဆိုင်တိုးခဲ့ရတယ်…မတတ် နိုင်ဘူး …ဒီလမ်းတွေမှမရွေးချယ်ရင်း…တခြားလမ်းကကြမ်းတယ်…ဆိုပါတော့…ကျမ…..ချားတေလာနဲ့မဲယှဉ်ပြိုင်ရွေးဘို့ဆုံးဖြတ်တုန်းက…ကျမကို…..တားတဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်…အန္တယာယ်များတယ်…မယုံကြည်ရဘူး…..စသဖြင့်ပေါ့လေ…. .တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…ကျမတခါ…ပြည်ပကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြန်တယ်….ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်မိ တယ်….ဒီလိုလမ်းကိုမှမရွေးချယ်ရင်…ကျန်တဲ့လမ်းတွေက..တိုင်းပြည်အထိနာမယ်…မသေချာမှု့များတယ်… ဒါ့ကြောင့်…ကျမ……သမ္မတအဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံဘို့မှာလည်း…ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး…အရွေးခံခဲ့တယ်…”